Biixi Archives – Axadle
Muuse Biixi: Kaalmada shisheeye si ay noo caawiso
Hogaamiyaha Gobaladda Waqooyi Muuse Biixi Cabdi, Saciid wuxuu sheegay in dowlada federaalka ay ku lug leedahay deeqaha ay ka heleen beesha caalamka mashaariic waaweynna laga fulin lahaa Gobaladda Waqooyi looga. Muuse Biixi ayaa sheegay in waxa ay Gobaladda Waqooyi ka hesho beesha caalamka ay tahay gargaar deg deg ah, isla markaana maalgelinta mashaariicda mustaqbalka ay caqabad ku tahay dowladda Soomaaliya. “Kaalmada shisheeye ee nala siinayo waxay u badan tahay gargaarka deg-degga ah iyo mashaariicda horumarinta…
Muxuu Muuse Biixi ka yidhi xaalada “Cakiran”
Hogaamiyaha Gobaladda Waqooyi Muuse Biixi Cabdi, khudbad-sannadeedkiisii ​​dastuuriga ahaa ee uu maanta ka hor jeediyey baarlamaanka, wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga, miisaaniyadda, musuqmaasuqa siyaasadda guud iyo doorashooyinka Gobaladda Waqooyi. Isaga oo ka hadlaya amniga, Muuse Biixi wuxuu sheegay in 51% miisaaniyadda Gobaladda Waqooyi lagu bixiyo amniga iyo nabadgelyada, halka 48% loogu talagalay dhammaan baahiyaha kale. Sidoo kale wuxuu sheegay in 993 musharax ay ka qeyb gali doonaan…
Ka waran safarkii Muuse Biixi ee Jabuuti? –
axadle	 Dec 23, 2020
Hogaamiyaha Gobaladda Waqooyi, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta u ambabaxay Jamhuuriyadda Jabuuti si uu ula kulmo Hogaamiye Ismaaciil Cumar Geelle. Safarka degdega ee Muuse Biixi ayaa salka ku haya sidii uu Geelle ugala hadli lahaa xaalada siyaasadeed iyo arimo kale oo aan wali warbaahinta loo soo bandhigin laakiin gadaal laga daabici doono. Qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Gobaladda Waqooyi oo ku saabsan socdaalka Muuse Biixi ayaa lagu sheegay in Hogaamiye Ismaaciil Cumar Geelle uu kala hadli doono danaha,…